Isidlo sakusihlwa se-Bachelor Christmas | Martech Zone
Isidlo sakusihlwa se-Bachelor Christmas
NgoMsombuluko, Disemba 25, 2006 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Umngane wami omuhle, Derek, ubelokhu ethumela i-imeyili, engishayela futhi engithumela imiyalezo usuku lonke ukuze angisindise ku Isidlo sakusihlwa se-Bachelor Christmas. Umkakhe, u-Anne, ungumpheki omnandi… umpheki onekhono. Bafuna ngize namuhla (khona manje) ukuze ngidle isidlo sakusihlwa esihle nomndeni wabo. UKhisimusi usuku lomndeni, ngakho-ke bengilokhu ngizizwa ngihlekisa ngihlala phansi ukuze ngiphule isinkwa nomunye umndeni. Yize beqhubeka nokushaya ucingo (ngilinde amaphoyisa ukuthi eze noma yinini), ngikhethe isidlo sami sakusihlwa.
Nge-Thanksgiving, izingane zami zancokola nami, “Sizodla hlobo luni lwe-pizza?” Kwakuyisisusa nje engangisidinga ukwenza idina elimnandi lokubonga. Sibe nemisebenzi! I-Turkey, ukugxusha, amazambane, i-gravy, uphaya wethanga, imiqulu, njll. Konke kwaphuma kahle - futhi ne-turkey yayimangalisa - i-Butterball enomswakama kakhulu.
Manje sekuwuKhisimusi futhi izingane zami zisemzini woMama wazo. Isikhathi se- Isidlo sakusihlwa se-Bachelor Christmas!
Ku-3AM namhlanje ekuseni, ngenkathi ngifunda emaphaseji ekhemisi lendawo lamahora angama-24, ngithole eyami Isidlo sakusihlwa se-Bachelor Christmas:
I-Lay's Cheddar kanye ne-Sour Cream Potato Chips… kunjalo abantu, bafaka idiphu kuzipisi ngakho-ke akudingeki ukuthi nichithe isikhathi nisifaka. Futhi zazithengiswa! Thenga 1 uthole 1 mahhala.
Amakani we-2 we-Campbell's Grilled Steak Chunky Chili. Lutho kodwa okungcono kakhulu!
Amakani ama-2 okudla okujwayelekile i-orange soda ebolekwe kumakhelwane wami (ngihleli endlini namakati akhe amathathu)
Futhi Ugwadule? Isigaxa esihle se-ACID Blondie. (Kutholwe ku-zip loc etafuleni lami… kulungile)
Ngithathe isithombe ukugcina imemori ngesikhathi:
Nina bafana ningacabanga ukuthi ngiyasangana ukuyeka ukudla okumnandi ngalokhu… kepha engeza itafula lethelevishini, abashayi besibhakela kanye nesipesheli somfokazi ku-History Channel, futhi sinoKhisimusi omuhle kakhulu kaDoug!
Merry Christmas Wonke umuntu!
Ukubonga Okungokomuntu Nokwenhliziyo Kuwe
2007 Sicela nilethe abahleli abasha
Dec 25, 2006 ngo-4: 36 PM
Dec 25, 2006 ngo-7: 03 PM
lol… lokho impela isidlo lapho uDoug. Ngenza into eyedwa futhi nakulo nyaka, kepha ngizwe sengathi kunamazambane nenkukhu esikhundleni salokho. Labo chips babukeka bebahle kakhulu,… ngifuna ezinye.
I-PS Ingabe ikhona indlela yokwengeza isici, ngakho-ke uhlelo lungikhumbula ukuvakasha ngakunye? Angiyena umlandeli wokubhala kabusha imininingwane yami isikhathi ngasinye. Ngiyabonga.
Dec 25, 2006 ngo-10: 42 PM
Ngiyabonga ngokuphawula izolo ebusuku. Ngingaba nentshisekelo yokukusiza ukuthi uvivinye umkhiqizo uma usukulungele. Ngiyabonga futhi ngokuphawula.
Dec 26, 2006 ku-2: 54 AM
Kepha kusabeka ngokuphelele ngasikhathi sinye!
Dec 26, 2006 ku-7: 35 AM
O, ngiyayithola, awuphenduli noma ubuyisele izingcingo ZAMI! 🙂
I-PS - Isidlo sakho sakusihlwa besinokukhubazeka (zonke iziphesheli ziyazi ukuthi ama-Pizza Rolls angumngani omkhulu womuntu)!
Dec 26, 2006 ngo-12: 05 PM
Manje udinga ukuya kusayithi lami bese ubona ukuthi kwenzekani lapho othile elindele ukubona uDoug esidlweni sikakhisimusi. http://www.drumminguy.com/?p=195
Dec 26, 2006 ngo-3: 55 PM
Ngizohamba noBill kangcono - lokho kuyigazi kabi !!
Ngokuzayo yamukela isimemo esivela kubangani bakho - ukudla okumnandi, iwayini elimnandi, (mhlawumbe i-cigar enhle) nengxoxo emnandi - zonke izithako zokudla okuphelele.
Dec 27, 2006 ngo-3: 15 PM
Awuzange uhambe ngoba uDerek ungumdumba onjalo. Futhi unalawo magciwane ephephandaba… Awudingi ukubeka izaba. Nginesiqiniseko sokuqeda lokhu kudla okunezinhlobonhlobo zokudla, uyajabula ukuthi awuzanga NGEMVA.